Izay Mihaona Bahrain ny Ankizivavy (Avy amin’ny Firenena fito) — ny Global Seducer
Afaka mitsidika ny Al-Fateh Grand Mosesy na ny national Museum. Saingy misalasala aho fa izany no tena antony hoe nahoana ianao no nanapa-kevitra ny hamaky an’ity lahatsoratra ity. Azonao atao ny mamaky izay rehetra momba ny tena malaza mpitarika mpizaha-tany ao amin’ny Wikipedia. Fa ny Wikipedia dia tsy hilaza aminao ny momba ny tsara indrindra an-tserasera mampiaraka toerana mba hitsena ny vehivavy ao Bahrain. Ary izy ireo koa dia tsy hilaza aminareo izay afaka hihaona rosiana, Thai, Indiana, Indoneziana, Sinoa, Filipiana ao an-toerana sy ny ankizivavy. Ity firenena ity dia tsy fantatra noho ny mail order vady. Nataoko be dia be fikarohana ary aho tsy nahita ny iray tokan-tena Bahrain mampiaraka toerana. Toa tahaka ny hoe ny vehivavy rehetra ao amin’izany Fanjakana izany ny efa manana ny olona. Fotsiny ianao mila mahalala ny toerana hitadiavana ny ankizivavy tianao ny hihaona.
Afaka nihaona maro samy hafa ny amin’ny vehivavy ao amin’ity firenena ity. Ny tiako holazaina, eo ho eo ny mponina ao aminy dia mpiasa vahiny sy ny mihoatra ny dimy amby efa-polo ireo mpihavy ireo Aziatika. Na dia ny teny arabo, ny fiteny ofisialy, ny olona rehetra dia ilaina ny miteny anglisy. Tsy mahagaga ahy noho ny rehetra ny mpiasa vahiny sy ny mpizaha tany. Ary izany no mahatonga ny fivoriana sy ny mampiaraka ny ankizivavy mba mora kokoa. Tsy fantatro hoe inona ny ankizivavy tadiavinao, fa tsy maintsy manomboka any ho any. Noho izany, aoka ny manomboka amin’ny vehivavy ao an-toerana ao Bahrain Na dia Bahrain dia manaraka ny fitsipiky ny Fahalalahana ara-Pivavahana, izay mamela ny Kristiana, Silamo, Haindò sy ny olon-drehetra mba hampihatra ny finoana, mety ho sarotra raha vao ny fitiavana hiampita finoana. Raha toa ianao ka Silamo ny lehilahy sy te-hihaona vehivavy mitovy zavatra inoana ara-pivavahana, manana na inona na inona mba manahy. Nandeha mialoha ary tsy hilavo lefona mandra-hahita ny tsara zazavavy. Tsara, raha raiki-pitia amin’ny Bahrain ny vehivavy, dia manana safidy roa. Azonao atao na ny niova ho Silamo (izay eken’ny besinimaro) na dia afaka mandresy lahatra ny ho vadiny mba niova ho Kristianina. Maro Bahrain ny vehivavy izay efa niova ho Silamo efa hohalavirina ny vondrom-piarahamonina ary efa niharan’ny herisetra ara-batana. Tsara, dia tsy mila miahiahy momba ny fivavahana. Tsy mampaninona ianao, raha Silamo na Kristiana. Ary maro ny rosiana ny vehivavy tokan-tena izay mitady ny fitiavana ao amin’ity firenena ity. Azonao atao na ny hitsena azy amin’ny rosiana-ponja sy pubs, toy ny rosiana pub ao amin’ny Ramee Balsama trano fandraisam-bahiny, na azonao atao ny manamarin avy isan-karazany fihaonana izay mifandray miteny rosiana ireo mpiasa vahiny amin’ny mponina ao an-toerana sy ireo mpiasa vahiny. Aho raha oharina amin’ny teny rosiana Cupid (ny tsara indrindra mampiaraka toerana mba hitsena rosiana ankizivavy) amin’ny Muslima (ny tsara indrindra mampiaraka toerana mba hitsena ny ankizivavy ao amin’ny firenena tsy Silamo). Rosiana Cupid manana mihoatra noho ny. tapitrisa ny mpikambana (hahita ny fomba nihaona am-polony maro ny rosiana tovovavy ity mampiaraka toerana), fa Muslima manana mihoatra rosiana ankizivavy ao Bahrain noho ny rosiana Cupid. Ankoatra izany, ianao dia afaka manapa-kevitra eo amin’ny fivoriana azy ireo amin’ny aterineto na any amin’ny tontolo tena izy. Afaka mandeha ny fihaonana, dia afaka mivory ny ankizivavy ao amin’ny otra misafidiana (manoro hevitra aho ny legit ireo) na dia afaka hihaona tovovavy handeha zava-mitranga izay mitondra ny Thailandey sy ny mponina ao an-toerana miaraka. Aho raha oharina ny isan’ny Thai mpikambana ao amin’ny ny lehibe indrindra Thai mampiaraka toerana miaraka amin’ny isan’ny Thai mpikambana ao amin’ny Muslima ao Bahrain. Miala tsiny aho, fa tsy maintsy ho marina. Ny hany fomba mba hihaona Indiana ankizivavy ao Bahrain dia ny handeha fihaonana sy manatona ny zazavavy ao an-tanàna. Niezaka aho mba hahita ny tsara online dating site izay afaka hitsena azy aho, saingy tsy maintsy manome ny. Raha toa ka hiaraka Muslima, dia afaka angamba hahita ny iray na roa Indiana ankizivavy ao Bahrain. Ny vokatra amin’ny Indiana Cupid koa tsy tsara kokoa. Ny fomba tsara indrindra mba hihaona Indoneziana ankizivavy ao Bahrain dia amin’ny alalan’ny fidirana Muslima. Mazava ho azy, dia tokony voalohany namaky ny famerenana (aho efa mifandray mba ampy ny fotoana ato amin’ity lahatsoratra ity). Izany mampiaraka toerana dia afaka mahita ny tena vitsy Indoneziana ankizivavy izay miaina ao Bahrain. Tsy fantatro ny antony, fa izaho ihany no nahita zazavavy iray mipetraka any Bahrain. Fa hey, angamba izy dia ho ny ho vadiny.
Tsy fantatrao ianao
Miala tsiny aho, fa tsy nahita na inona na inona Sinoa vavy amin’ny Muslima ary izaho koa tsy mahita be dia be ny Sinoa vavy, izay monina ao Bahrain tamin’ny Shina Fitiavana Cupid. Mino aho fa efa namely ny mpandroso sakafo any amin’ny Sinoa ny toeram-pisakafoanana na mampifantoka ny ezaka amin’ny Filipiana tovovavy aho mba hanao ho mandiso fanantenana ny vokatra ho an’ny tovovavy Shinoa ao Bahrain. Ary izaho dia afaka, noho izany dia tena mora ny hihaona Filipinas ao Bahrain. Tsara, na dia Muslima dia ny tsara indrindra mampiaraka toerana mba hitsena an-toerana ny vehivavy, fa tsy ny tsara indrindra mampiaraka toerana mba hitsena Filipiana ankizivavy ao Bahrain. Mizara ny tsara indrindra mampiaraka toerana mba hitsena Thailandey sy ny Filipiana tovovavy ato amin’ity lahatsoratra ity.
Ianao mahita ny marina ny ankizivavy
← Ahoana no hahatonga ny Vehivavy ho amin'ny Fitiavana sy Mpifoka: ara-teknika, tsy azo sakanana
Dubai tovovavy - trano fandraisam-bahiny ary club list - Hahita ny Tena Fitiavana →